Customer Acquisition Specialist | BOD TECH Co., Ltd ﻿
15.7.2019, Full time , Information Technology
•	Get Ride Potential New Users များ နှင့် တွေ့ ဆုံကာ အချိန်မ ရွေး marketing ဆင်းပေးရမည်။
•	Customer အသစ် ၊ Market အသစ်များအား Plan ချပြီး ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ရှာဖွေနိုင်ရမည်.
•	Organisation များ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၊ GET Ride New Users များ အသုံးပြု လာအောင်ပြုလုပ်ပေးရမည်။
•	ချမှတ်ထား သော KPI များကို timeline အတွင်းတွင် ထိအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ Customer များ (သို့ ) B2B, B2C clients များ နှင့် တွေ့ ဆုံကာ Deal များ ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ B2B, B2C Negotiation Skill ကို ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိင်ရမည်.
•	Customer များရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အသင်းအား ဖလှယ်ပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်သော service များ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
•	အပတ်စဉ် sales, Acquisition target များ ထိအောင် ပြုလုပ်ရမည်။ Get နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော နည်းပညာအခက်အခဲ နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး အ ဖြေရှာပေးနိုင်ရမည်.
•	အပတ်စဉ် Sat,Sun ကို အခါအားလျော်စွာ Get အတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ရမည် Get မှ ရရှိ သော ၀န်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နားလည်ပြီး အမြဲ သင်ယူခံယူ လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်.
•	Sales / Marketing Experience (1 ) year
•	Must have skill in MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
•	Performance Result ထွက် အောင် ကြိုးစားပေး နိုင်ရမည်. စကားပြော အလွန်ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည် ။
•	Deal & Negotiation များကို အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် အလုပ် ကိစ္စ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အပြင် နေ့ စဉ်ထွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည် အခက်အခဲကို ဆင်ခြေများ မ ပေးပဲ ကျော်ဖြတ်ရန်။
•	ကို်ယ့်ကိုကို ယုံကြည်မှု ရှိသူဖြစ်ရမည်, မည်သည်ကိစ္စ မဆို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	ဈေးကွက်အ ခြေအ နေ ဗဟုသုတ များကိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်သူ့ဖြစ်ရမည်.
Company Industry: Customer Acquisition Specialist
Job posted: 15/7/2019
105 Days, Full time , Information Technology
122 Days, Full time , Information Technology
128 Days, Full time , Information Technology
136 Days, Full time , Information Technology
149 Days, Full time , Information Technology
176 Days, Full time , Information Technology
240 Days, Full time , Information Technology
Customer Acquisition Specialist Customer Service & Call Centre jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon BOD TECH Co., LTD Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Customer Acquisition Specialist Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Customer Service(5BB) M/F (4)
Customer Service (Chinese4skills) M/F (3)
Senior Executive (Customer Service) M/F (2)
Customer Service (Chinese4skills)
Customer Service Executive (Export/Import) (Code - 30514)
User Acquisition & Experience Manager
Sales Specialist - System Integration
Customer Service Junior Executive